Raadinta Google Search Console Ayaa Ka Cabsi Qabsatay Aniga! | Martech Zone
Axad, Oktoobar 26, 2014 Khamiis, Maarso 25, 2021 Douglas Karr
Waxaan ka shaqeyneynay habeen iyo maalin diyaarinta Martech isbedel naqshadeynta soo socota. Shaqada waxaa ka mid ahaa dib ugu noqoshada 4,000 oo qoraal ah - oo la hubinayo inaan soo bandhignay sawirro, nuxurka ma aha mid waqtigiisu dhammaaday (sida barnaamijyada ka baxay ganacsiga), iyo hubinta inaynaan haysan dhibaatooyin kale oo la yaab leh… sida ilaa 100 qoraal. in aan khalday koodhka html ee loogu talagalay koodhadhka koodhadhka, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaan sidoo kale sameynay dib-u-eegis gadaal-gadaal ah oo waxaan siinnay tiro ka mid ah boggaga internetka ee spam-ka ah ee na tilmaamaya.
Mid ka mid ah kordhinta dheeriga ah waxay ahayd inaan rakibnay an Shahaadada SSL si loogu diyaar garoobo qaar ka mid ah jiilka hogaanka iyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waxaan ku dari doonnaa goobta. Ma aha in la sheego in Google uu ka dhawaajiyay in haysashada goob aamin ah ay saameyn togan ku yeelan karto qiimeynta mustaqbalka. Dhammaan isbeddelada aan sameynayay waxay xaqiiqdii saameyn ku yeesheen. Xaqiiqdii, bishii ugu dambaysay taraafikada mashiinka raadintayadu waa labanlaabmay. Waa kan shaashadda laga soo qaaday Xeebaha:
Si daacadnimo ah uma haysanno waqti badan oo aan uga shaqeyno Martech sidan oo kale tan iyo markii aan ka shaqeyneyno inaan hubinno in dhammaan macaamiisheenna boggeeda ay yihiin kuwo la hagaajiyay. Iyada oo qayb ka ah geeddi-socodkayaga, waxaan isticmaalayay dhowr qalab si aan u xoqo barta raadinta arrimaha, waxaanan saxay arrimo yaab leh oo Raadinta Raadinta Google ayaa shaaca ka qaaday… sida cinwaanada nuqul, iwm.
Marka… ka fikir falcelintayda markii aan galay Raadinta Raadinta Google toddobaadkan oo tan arkay:
Waan hubiyey khaladaadka ku jira Maamulayaasha Websaydhada qaladaadkuna si weyn bay hoos ugu dhaceen. Waan hubiyey oo dib-u-hubiyey my Liiska hubinta CMS SEO - faylka robots.txt, khariidadeyda bogga, dib u jeedintayda redi wax walba! Waan hubiyey wixii fariimo ah (tusaale rigoore) mana jirin wax fariimo ah oo la ii soo diray. In kasta oo layga xannibay, haddana ma caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay haddii wax khaldameen Maamulayaasha Websaydhada.
Ka dibna way ii timid… ka waran haddii Google Search Console wuxuu ubaahanyahay wadada aaminka ah goobta? Markaa waan isdiiwaangaliyay https: //martech.zone halkii http://martech.zone. Xaqiiqdii xitaa uma baahnin inaan beddelo sumadda cinwaanka. Waa tan waxa soo kordhay:
Google… gabi ahaanba waad ka cabsatay wax yaabaha iga baxsan. Waxaan u maleynayay inaan ku sameeyay wax aad u xun goobtayda oo aan joojinayo raadinta gebi ahaanba. Haye!
Tags: mareegaha googleqalabka webmasters googlehttp seohttps seoMareegaha httpsseo aan ssl ahaynseo sslssl iyo non-ssl seomaamulayaasha sslqalabka webmastermacalimiinwebmasteriyada httpsmareegaha ssl
Cuntojebiye: Macaamiisha u rog Danjirayaal Sumcad Wadaag Bulsho!